Jamaahiirta Liverpool Oo Codsi Niyad-jabinaya Mohamed Salah U Gudbiyey Tababare Jurgen Klopp Iyo Waxay U Sheegeen – Latest Sports News
Jamaahiirta Liverpool Oo Codsi Niyad-jabinaya Mohamed Salah U Gudbiyey Tababare Jurgen Klopp Iyo Waxay U Sheegeen
Jamaahiirta kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa soo bandhigay sida aanay rajo buuran uga qabin halyeygii xili ciyaareedkii hore wacdaraha u dhigay ee Mohamed Salah, waxaana si buuxda oo ay isku waafaqsan yihiin ay tabbabarahooda uga codsadeen hal arrin oo niyad-jabinaysa xiddiga reer Masar.
Liverpool ayaa u degtay kaalinta labaad oo ay hal dhibcood ka hoosayso Manchester City oo hoggaanka horyaalka si rasmi ah ula wareegtay xilli uu fasal-ciyaareedku gebogebo ku dhow yahay, ayna ka hadhsan yihiin sagaal kulan oo kaliya, waxaana taas sabab u noqotay barbar-dhac ay la galeen Everton oo ay ugu tageen garoonkeeda.
Mohamed Salah ayaa ciyaar liidata soo bandhigay kulankan, waxaanu khasaariyey fursado badan oo goolal noqon karayey oo uu kalidii goolhayaha kubadda kula baxay, gaar ahaan daqiiaddii 27aad oo isaga iyo goolhaye Jordan Picford ay isku kaliyeysteen.
Kalidii muu ahayn laacibka liitay, balse waxa isaguna tamartii badnayd aan haysanin Sadio Mane oo si adag loo xakameeyey.
Haddaba jamaahiirta Liverpool ayaa ka codsaday tababare Jurgen Klopp inuu kaydka dhigo Mohamed Salah kulamada soo socda, iyagoo isku-aragti ka noqday go’aankan.
Jamaahiirtu waxay tababarahooda usoo jeediyeen in Salah uu ka mid noqdo ciyaartooyada daawedeyaasha ka ah kulamada ee kaydka ku caajisay, isla markaana booskiisa la keeno Shaqiri.
“Waxay ila tahay in la gaadhay waqitigii kaydka la gelin lahaa Salah ee la keeni lahaa Shaqiri-ga weyn ee uu is kululayn lahaa. Uma ciyaarayo sidii laga filayey.” Sidaa waxa barta Twitterka kusoo qoray taageere Liverpool ah oo saluugay bandhigga Mohamed Salah.
Mid kale ayaa isaguna soo qoray: “Ka warran haddii usbuuc kasta aynaan haysanin ciyaartoy hal-abuur leh sida Coutinho… City na ay haysato daraasiin.”
Mid kale oo isaguna cadhaysan ayaa yidhi: “Waa ciyaaar caajis ah sidii kulankii Man United”